Ndị na-ahụ maka Internet - Ozizi
Ozizi nke ụka Kraist
Daalụ maka ịga na Ngalaba ndị Ozi anyị nke ụka nke Kraịst. Edere nke a maka abamuru nke ndi Kraist nile na ndi choro imata ihe banyere Onyenwe anyi. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị itinye aka n'ụdị ozi ụfọdụ, anyị na-agba gị ume ka ị kpọtụrụ onye ọ bụla n'ime ndị nlekọta maka ozi ndị ọzọ.
Na Nchịkọta Nchịkọta e depụtara n'elu ị nwere ike pịa ụdị njikọ ọ bụla dị na taabụ "Minista" ka ịnweta ndepụta nke ọrụ nlekọta anyị.
Ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ na ngọzi iji jeere ụka nke Kraịst na ụwa ozi ọma na ozi ọma nke Jizọs Kraịst Onye-nwe. Anyị na-atụ anya ijere gị ozi. Ka amara nke Chineke, ịhụnanya Jizọs, na udo nke Mmụọ Nsọ dịyere gị na ezinụlọ gị ruo mgbe ebighị ebi.
Anyị nwere ike inyere aka. Onye na-emepụta ihe n'Ịntanet anyị dị mfe iji ma nweere onwe iji iji ọ bụla n'ime ụlọ ọrụ weebụ anyị akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị nwere ike ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ ọkachamara dị ọnụ ala. pịa ebe a ma ọ bụ na weebụsaịtị Weebụ maka nkọwa ndị ọzọ.